Telefoon: +86898 66553777
Kalluunka Kalluunka Kalluunka
Kalluunka Badda Oligopeptide
Kalluunka loo yaqaan 'Tilapia Fish Collagen Peptide'
Caanaha loo yaqaan 'Soybean Peptide'
Badda Qajaar Badeed
Kalluunka kalluunka loo yaqaan 'Cod Fish collagen Peptide' waa nooc ka mid ah 'collagen peptide'.Waxaa laga soo qaadaa maqaarka kalluunka kalluunka, oo lagu farsameeyo haweenta loo yaqaan' enzymatic hydrolysis 'ee heerkulka hooseeya, Waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa cuntada, daryeelka caafimaadka, daawooyinka iyo warshadaha qurxinta.
Kalluunka badda oligopeptide waa badeecad si qoto dheer loo farsameeyay oo ah kalluunka kalluunka badda qotoda dheer, waxay leedahay faa'iidooyin u gaar ah xagga nafaqada iyo dalabka. Intooda badani waa maaddooyin yaryar oo isku dhafan oo peptide ka kooban 26 amino acids oo leh culeys molikal ah oo ah 500-1000dalton. Waxaa si toos ah u nuugi kara mindhicirka yar, maqaarka dadka, iwm. Waxay leedahay astaamo nafaqo oo adag iyo adeegsi ballaaran.
Hainan Huayan Collagen Technology Co., Ltd waxay soo saartaa 4,000 tan oo kalluun tayo sare leh sanadkiiba, kalluunka collagen (peptide) waa hanaan cusub oo loo yaqaan 'enzymatic hydrolysis' oo asal ahaan ay abuurtay shirkadda Huayan, taas oo ka faa'iideysata walxaha bilaa wasakhda ah ee miisaanka iyo maqaarka. . Marka loo barbardhigo hiddo-wadaha dhaqameed ee acid-base ee kolajka, habka loo yaqaan 'enzymatic hydrolysis' ee shirkadeena ayaa leh faa'iidooyin badan: Marka hore, sababtoo ah xaaladaha enzymatic hydrolysis caadi ahaan waa kuwo fudud, ma jiri doono kala duwanaansho ku timaadda qaab dhismeedka mecole iyo ma-joojinta qaybaha shaqada. Marka labaad, enzyme-ku wuxuu leeyahay goob kala-goynta hagaajinta, sidaas darteed wuxuu xakameyn karaa miisaanka molecule ee kolajka leh iyo inuu helo hydrolysates leh qaybinta culeyska maadada. Mar saddexaad, maxaa yeelay aashitada iyo alkaliska looma adeegsado habka loo yaqaan 'enzymatic hydrolysis process', habka loo yaqaan 'enzymatic hydrolysis' waa mid bey'adu ku habboon tahay oo aan wasakheyn deegaanka.
Earthworm peptide waa peptide yar oo molecule ah, waxaa laga soosaaraa ụwaworm cusub ama qalalan iyadoo la beegsanayo tikniyoolajiyadda dheefshiidka bio-enzyme. Earthworm peptide waa nooc ka mid ah borotiinka xayawaanka oo dhameystiran, kaas oo si dhakhso leh oo gebi ahaanba nuugi kara! Waxaa soo saarey isku-buuqsanaanta enzymatic ee go'doominta Earthworm-ka. Barootiin yar oo molecule ah oo celcelis ahaan culeyskeedu yahay molecule ka yar 1000 DAL, waxaa si weyn loogu isticmaalay xarumaha caafimaadka waxaana si isdaba joog ah loogu adeegsadaa xarunta kahortaga iyo daaweynta ee wadnaha, cerebrovascular, endocrine, iyo cudurada neefsashada. Waxaa si weyn loogu isticmaali karaa cuntada, alaabada daryeelka caafimaadka, dawooyinka, qurxinta iyo qaybaha kale.
Oyster peptide waa unug yar oo loo yaqaan 'collagen peptide', waxaa laga soo qaataa lohod cusub ama lohod qalalan oo dabiici ah iyada oo la siinayo daaweyn gaar ah oo horudhac ah iyo tiknoolajiyada dheefshiidka bio-enzyme ee heerkulka hooseeya. Oyster peptide wuxuu ka kooban yahay astaamaha raadraaca (Zn, Se, iwm), oyster polysaccha raacid iyo taurine, waxay si wada jir ah uga shaqeeyaan ilaalinta iyo kobcinta jirkeena Waxaa si weyn loogu isticmaalaa cuntada, dawooyinka iyo alaabada daryeelka caafimaadka
Pea peptide waa peptide yar oo firfircoon oo firfircoon, waxaa laga soo saaraa borotiinka digirta iyadoo la adeegsado dheef-shiidka enzyme bio-complex. Peptide digir wuxuu ka kooban yahay sideed nooc oo amino acids ah oo anfaca aadanaha. Waxsoosaarka digirtu waxay la kulmi kartaa dalabka nafaqada ee amino acids ee FDA.
Peptide qajaarka badda waa peptide yar oo molecule ah, waxaa laga soo qaadaa qajaar bada oo qalalan ama qalalan iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyada dheefshiidka bio-enzyme. Badanaa waa peptides collagen waxayna leeyihiin ur kalluun gaar ah. Intaa waxaa dheer, qajaarka badda sidoo kale waxaa ku jira glycopeptides iyo peptides kale oo firfircoon. Maaddooyinka waxay ka kooban yihiin kaalshiyam firfircoon, kaligeed-saccharide, peptide, saponin qajaar qajaar iyo amino acids. Marka la barbardhigo qajaarka badda, polypeptide qajaarka badda wuxuu leeyahay astaamo dabiiciyeed oo dabiici ah sida xallinta, xasilloonida iyo nafwaayaha hooseeya. Sidaa darteed, hydrolysis-ka enzymatic-ka ee peptide qajaarka badda wuxuu leeyahay bioavailability ka badan kan caadiga ah wax soo saarka qajaar badda. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa cuntada iyo alaabada daryeelka caafimaadka.
Soybean peptide waa maadad yar oo firfircoon oo firfircoon, waxaa laga soosaaraa borotiinka ka soocda soy ee habka enzymatic hydrolysis. Waxyaabaha borotiinka ku jira ayaa ka badan 90% waxayna ka kooban yihiin 8 nooc oo amino acids ah oo waxtar u leh aadanaha, waa shey ceyriin heer sare ah oo loogu talagalay cuntooyinka iyo alaabada daryeelka caafimaadka.
Walnut peptide waa peptide yar oo maadada collagen ah, waxaa laga soo qaadaa walnut iyadoo la bartilmaameedsado dheef shiidka bio-enzyme iyo tikniyoolajiyadda kala soocista xuubka heerkulka. Walnut peptide waxay leedahay sifooyin nafaqo oo kafiican, waa shey ceyriin cusub oo amaan ah oo shaqeynaya cuntooyinka.
Waxyaabaha ceeriin: Waa qayb ka mid ah kolajka laga soo saaray lafaha bovine. Ka dib hoos u dhaca ku yimaadda heerkulka sare iyo nadiifinta, enzymes-ka waxaa lagu daraa tiknoolajiyad soo saarista kaabayaal ah oo heer sare ah si loo kala saaro borotiinka tayo sare leh lafaha bovine.
Geedi socodka: Ka dib markii la faray dheefshiidka enzyme, qurxinta, deodorization, fiirsashada, qalajinta, si loo sameeyo alaab leh maadada peptide sare.
Astaamaha: Budada labiska ah, midab yar oo jaalle ah, dhadhan qafiif ah, oo gebi ahaanba ku milma biyaha oo aan lahayn wax roob ah ama qashin ah.
No.12 Meifeng Road, mei'an Science and Technology New Town, Haikou National High-tech Zone, Haikou City, Gobolka Hainan, Shiinaha.
Right Xuquuqda daabacaadda - 2010-20220: Dhammaan xuquuqda ayaa la keydiyay.